I-Quantum GIS, umbono wokuqala-iGeofumadas
NgoJulayi, 2009 Geospatial - GIS, GvSIG, Ukuprinta kokuqala, qgis
Ukuba ngabahlobo be-gvSIG bagcina isithembiso sabo, Ngomvulo olandelayo kaJulayi 27 siza kuba nohlobo 1.9 oluzinzileyo. Ukuza kuthi ga ngoku uvavanyo lube lukhulu, ngokomthamo obonwe kwifayile ye- uluhlu lokuhambisa. Ngelixa uMvulo ufika, kuba xa ndinethemba lokonwaba lokuvuyisana nelizwi lokuthotyelwa, ngendleko yokungalali ngokuqinisekileyo ekufuneka kuphuhliswe ngabaphuhlisi, masiqwalasele i-Quantum GIS enje ngoluhlobo lwentaka.
I-QGIS yaphuhliswa kwi-C ++ isebenzisa izixhobo zeQt, isebenza kwiWindows, Mac nakwiLinux. Iprojekthi yavela ngoMeyi 2002, ngenkxaso yeelwimi ezingama-26 kunye nelayisensi yayo yiGPL.
Siza kuzama i-1.02 ingqungquthela eyangishiyile ngokwenene ukuba ibe yithuluzi samahhala, ingalayishwa kweli qhagamshelo kwaye ngulo iphepha elisemthethweni laseQgis.
Ukubonakala kweGumum GIS
I-iconografi kunye noyilo lojongano yeyona nto inokuhlawulelwa, ayichaphazeli ukusetyenziswa, kodwa ichaphazela ukungcamla okuhlangeneyo (ukuthengisa) xa usinikela. Inkangeleko yokuba Ndigxeka ngaphambili ye-gvSIG, kuba ngezinye iinkalo ukubonakala kwayo nokungafani kwendalo kubangela ukuba umphathi andixelele "ibukeka njengeprogram yezilwanyana, ezinye iimpawu zibonakala zenziwe nge Paintbrush ye-bits 8".
Kodwa kule nto ubukhulu, QGIS ukwenza kakuhle kakhulu, nkqu elula cofa uyakwazi ukukhetha imixholo eyahlukileyo iconography 3 baba nengcinga kakuhle ngokuhambisa i mouse ngapha umba ubonisa indlela kujongano ngabe unjani.
Impawu ezinomdla kwi-Quantum GIS
I-QGIS ifuna ingca kwizinto ezininzi ezenziwayo ezi zixhobo zisungulwe kakuhle, zilunge kakhulu ukuba zingaphindi. Xa uqala i-QGIS kwaye ungayifumani ifakiwe, iphakamisa isilumkiso; Kule meko ndenza uphononongo ngaphandle kokufaka ingca. Xa ndifuna ukufaka idathasethi yeGrass, kuba ayifakwanga, isicelo sivaliwe, ke andikukhuthazi ukuyisebenzisa ngaphandle kokufaka zombini izixhobo.
Iifutshane, Imiyalelo emininzi ineleta eyabelweyo, enjengokuba umsebenzi unokulayishwa ngokucinezela le leta. Oku kuyasebenza kakhulu, ndiyakhumbula ukuba kwi-AutoCAD yenye yezona ndlela zibalaseleyo xa phantse yonke imiyalelo yenziwa ngekhibhodi.
Uhlolo-mpendulo, Kwiphaneli yasekhohlo yimephu ebonisa indawo yokuhambisa, ungqamaniso kuzo zombini iingoma. Iluncedo kakhulu, ungakhetha ukuba zeziphi izaleko ofuna ukuzibona kwisishwankathelo, kwaye inokuphoswa njengefestile edadayo kubungakanani obahlukileyo.
Isakhelo esecaleni, sikhulu nje, ungatsala iiplagi njengeeleyibheli ngaphambili, zinokwenziwa zidade, kwaye ngeqhosha lasekunene elilula lisebenzise okanye usebenze. Kananjalo ulawulo lobubanzi lulula ukurhuqa kungekuphela kwiphaneli yasekhohlo kodwa nakwelingezantsi.
Ipaneli ephantsi, xa kuboniswa itafile yophawu, iyavela kwindawo, kodwa inokudada kwakhona. Isebenza kakhulu, kunye nokukhetha ukusondeza kwimiqolo ekhethiweyo kunye nokutshintsha ububanzi beekholamu ngokutsala okulula kwemouse. Kwisakhelo esezantsi inokukhangela kunye nokukhetha imisebenzi, ngokufanayo nendlela ene-GIS enayo, ngaphandle kwebar yomgangatho olula.
Ukuqulunqwa kwale interface design kwenza kube ezisebenzisekayo ngakumbi, yintoni iframe yeyona ilungileyo, indikhumbuza Microstation, njengokuba kunjalo, athunyelwe ukuba iimpawu window ngaphandle echaphazela eminye imisebenzi.
Uhlalutyo lwedathaIngaba iziseko geoprocessing kunye nophando ukuba umntu angafuna, xa uqala kukho iimpawu ezithile umdla kakhulu ukuba ukhetha ukubona ngesinye isihlandlo, njengoko fTools plugins ziquka terrain modelling, zoxinzelelo lwamanzi kunye nabanye.
Iiplagizi ezingaphezuluNjengaso nasiphi na isicelo se-gpl, inzuzo yayo ikwiiplagi ezenziwa luluntu kancinci kancinci (nangona zinenzuzo yokungabikho kwiJava), ngokungagqibekanga kuzisa iziseko kwaye zibonakala zimbalwa kodwa azikho lula njengoko zibonakala ngathi: zinokulayishwa Imigca ye-WFS, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kwiMapServer, ukufaka ulungelelwaniso, ukongeza izixhobo ezibonakalayo ezinjengasentla, isikali kunye nelungelo lokushicilela, isicatshulwa esikweyiphi ikoma, ine-dxf kwi-shp converter, iplagi ukuya kwimifanekiso ye-georeference, i-gps console, i-python console, i-mesh yokulungelelanisa njl. Kodwa eyona nto intle lukhetho lokulayisha iiplagi zeGrass eziyisihloko esahlukileyo. Kuyafana nokwenzekayo nge-gvSIG kunye ne-Sextante nangona ukukhula kweGrass kuhlonitshwa, sesinye sezixhobo ezindala ze-GIS.
Okubangel 'umdla kukuba OGR lokuguqulela, nto leyo ukuguqula iimaleko phakathi iifomati ezahlukeneyo, ezifana SHP, DGN, eyisebenzisayo, GML, CSV, KML, MapInfo kunye nesithuba BD nge ODBC, I SQL yam, PostgreSQL, phakathi kwabanye.
Eyona nto ihamba phambili: dxf ukuya kwi-shp kunye ne-kml ukuya kwi-dxf, eyona siseko kodwa engenziwanga ngezinye iinkqubo zokuhlawula.
Imisebenzi ebalulekileyoNjengezinye izixhobo, unokwenza iibhukhimakhi zomhlaba, amaqela oomaleko, iileya zinobuncinci kunye nolawulo oluphezulu lokusondeza, ukufumaneka lula kokongeza iinkqubo zokulungelelanisa kunye noqikelelo; kwimeko yee-shp layers, ukuba zine-prj, i-Qgis ihlangula olu lwazi. Iinkqubo ezininzi zibandakanya ibha yenkqubela phambili, esicinga ukuba intle kakhulu.
Kuyathakazelisa kakhulu ukuba iimpawu zezinto ziqwalaselwe njani, kuba kwiphaneli enye kukho iithebhu zepropathi ngokubanzi, uphawu, imethadatha, iilebheli, iintshukumo kunye neempawu zetheyibhile; Yonke into ingagcinwa njengesitayile se-.qml kwaye ilayishwe ukufaka kwezinye iindlela Le tafile iyadada kwaye ububanzi nobude bayo bunokuhlengahlengiswa ukunambitha. Nokuba lepaneli kunye nezinye zinokuvulwa njengesicelo esahlukileyo.
Kwakhona kugxininisa ekusebenzeni okubonakala ngathi kulula kodwa kunokuba luncedo kakhulu, njengokulinganisa kwemida eqhubekayo, eboniswa kwipaneli yamathala, equka umgama wecandelo ngalinye.
Ukufikelela kunye nokuhlela idatha
Ungayilayisha idatha ye vector shp, gml, Mapinfo kunye ddf, nangona idatha evela kwezinye iifom inokuguqulwa ngesiguquli se-OGR. Ukongeza ii-vector layers ngeWFS kunye nePostGIS. Ukuhlawulelwa kwakhona, kukuvumela ukuba uchaze ubhalo lwekhowudi xa ulayisha umaleko.
Ngokubhekiselele kumacandelo e-raster, ixhasa kakhulu, ngaphandle kweWMS. Ukongezelela, kubandakanya ukufunda i-OGC, i-WCS, i-CAT, i-SFS kunye ne-GML imigangatho.
Ukwenza ii-vector layers ezintsha zinokwenziwa ngeefayile zobume be-OGR okanye ingca. Iiprojekthi zigcinwa njengeXML ngolwandiso lwe-qgs, apho kugcinwa isitayile se-gvSIG.
Ngokumalunga nokuhlelwa kwedatha, iinkcukacha ezinje ngenkqubo yokulungelelanisa, iiyunithi, ukuchaneka kwedesimali, ukuvumela ukuhlelwa kwendalo, imvume okanye umda wokugqagqana kweepoligoni kumaleko afanayo kunye neemeko ze-snap (uhlobo kunye) zigcinwa kwipropathi yeprojekthi. unyamezelo) kulwahlulo ngalunye olufumanekayo kwiprojekthi. Le yokugqibela inomdla, nangona bendiphoxekile kuba inecandelo kunye nenketho ye-vertex kuphela. Ndinyanzelisa ukuba, ingca kufuneka ibe sisizathu soku.
Ndazama ukuhlela ungqimba, ukufaka i-vertex, kodwa ndakuyifumanisa, ngaphandle kokuba kubalulekile ukuba ungeze ukhetho lwe-snapping (Ndiyaxolisa ngenxa yokuxhamla kwam, okokuqala ndidlala le nto yokudlala). Ndizakuyibona emva kokuba ndilayishe izixhobo zokuhlela ingca. Kwaye akubonakali ngathi kukho umkhondo ukuba uninzi luhlela umaleko ngaxeshanye, nabani na ogcina impumelelo kuqala. ugh!
Ngeenjongo zokukhupha ngokukhawuleza, kukho ukhetho lokugcina umbono njengomfanekiso, kunye ne-plugin yokuprinta ngokukhawuleza, kodwa ngokungafaniyo ne-gvSIG, ayinalo ulawulo lobeko lwe-ArcView; kodwa endaweni yoko umqambi wokuprinta okhangeleka ngathi uthathiwe ezinweleni, nangona ivumela ukulayisha iifom zedatha, iilebheli, iibhokisi kunye neesimboli, kunye nokuqanjwa okuninzi kunokwenziwa kwiprojekthi, andifumananga ukuba ndingazigcina njani njengeetemplate; incwadana ithi inokwenzeka. Ndicinga ukuba kukho izinto ezingcono kwiiplagi zeGrass kwezi njongo.
I-Quantum gis neAcGGIS
Kakade siya kuthi, emva komhla olandelayo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uhlolo lweeastastral
Post Next I-28 ekupheleni kweMvelo yeMveloOkulandelayo »
28 uphendula "I-Quantum GIS, umbono wokuqala"
Arnold Fernández Rivas uthi:
Sawubona, ndiyaqonda ukuba ayikho i-freeware, nangona ayiyiyo inxenye ye-Qgis kwaye ayikho i-Free Software ngoko kuya kuba bubulumko ukwenza olo bhengezo kwiblogi. Emva kwakho konke kubonakala ngathi ezinye zilungile.
UJose Guerrero uthi:
Nantsi into enjengeyifunayo:
Umbuzo wam umalunga nengca kunye ne-qgis, bendi hamba kuzo zombini iisoftware kodwa ndinengxaki kwaye andazi ukuba oko kukuthintela inkqubo okanye ukunciphisa ulwazi kum, umbuzo ngulo, ngaba i-qgis okanye ingca inemodyuli egqibeleleyo yokuhlela ? Ndithetha ukuthwebula apho zenziwe zasebenza khona, okanye indlela yokwenza, umzekelo, ukugcwalisa ngokuzenzekelayo ipoligoni kunye nommelwane, into enxulumene nolo hlobo lwento
Ngaba kukho ithuba lokwenza i-buffer ephezulu kunye ne-qgis 1.7?
I-AutoDesk inesicelo sokukhuphela ngaphandle kwefowuni, kubizwa ngokuba yinyanisoView, ngoku unokuguqula ifayile ye-dwg kwifom ye-dxf
Ndiyibhale ngenxa yokuba ndifumene le dilesi yeVenen wiki ekhankanywe ukuba:
dwg: Ifomathi ye-Autodesk eyimfuneko, ayixhaswanga yi-Quantum GIS / GRASS GIS.
Sawubona oogxa nabo, umbuzo ungolu hlobo lulandelayo, Ndingayifaka njani iifayile zandiso ze .dwg kwi-Quantum Gis? I-plugin ye-Dxf2Shp ibhekisela kuhlobo lwe-dxf.
Ezi nkqubo zifunda iifayile zohlobo lwefayile, ukuba ikulo fomathi uneenkcukacha ze-ArcGIS. Into ekufuneka uyenzile kukwakha ngokutsha i-mxd ngeprojekthi efanayo.
Ukuba idatha yakho i-geodatabase, ungayifaka.
Ubusuku obuhle onokundinceda ukuba ndifuduke kwi-ArcGis ukuya kwiKosmo okanye i-gvsig okanye ithuluzi elingahlawulelwayo, ndiyidingayo ngokukhawuleza kuba iyakhawuleza ukuphela komcimbi enkosi kakhulu.
yam imeyile ocampogiraldo@gmail.com
Ndiyilonga iipolgoni esebenzisa i-orthophoto yeWMS njengesiseko.
gvSIG: Iifoto zithwala ngokukhawuleza, kodwa ukusondeza xa uhamba nge-orthophoto ngumonakalo
I-Kosmo: Iifoto zithwala ngokukhawuleza, nangona kubonakala kukhululekile ukukhangela
I-QGIS: Efana neKosmo, elula ngakumbi ukuyijonga, ifoto ingathatha iminyaka ukulayisha.
Yiyiphi ingxaki enokufumaneka kuyo nganye?
Iprojekthi yeQuantum GIS enolwandiso lwe-qgs ayinanto, ireferensi kuphela kububanzi obabelweyo. Ke into oyenzayo kukubona ukuba ungaziguqula njani ezi layers, ezinokuba ziifayile zohlobo lwe-disg okanye i-dxf.
Ngaba kukho umntu owaziyo ukuba ndingayidlulisela njani ifayile ye-quantum kwi-AutoCAD?
Christian Gallor uthi:
ukukhuphela i-cartoongraphic dijitalized yaseSpain ungasebenzisa i-osm
Ndiqhuba inkqubo ye-GIS kwi-intanethi kwisimo sextant kosmo. Kwaye ndijamelene neengxaki ezincinci. Xa ndinika nayiphi na isicelo enenjongo yokudala uhla lwe-raster, ndivala le program.
Ngaba kukho nawuphi na umntu ocinga ukuba kutheni?
Ndingathanda ukwazi apho ndingayifumana iCARTOGRAPHY EFANELEKILEYO esuka eSpain (ngokukodwa esuka eValencia) ukuba ikwazi ukuyisebenzisa ngeprogram ye-QUANTUM GIS.
Nceda, ukuba unolwazi, ndixelele ... ndilahlekile ...
Enkosi kuwe, yaye andazi nokuba xa uceba ukudibanisa umnqongo ukujonga ngaphandle tenr ukuba kudlule shapefile ukususela imigca iilebhile kunye ungqameko iintlobo, amanqaku, iipolygons neelebhile ezi ngokwemaleko ezahlukeneyo, ngokufuthi kufuna umbono kuphela kwaye esenza le amanyathelo athatyathwa
Kufuneka uyiguqule ukuyila ifayile, uya kwiiPlagi, uze ukhethe i-dxf2shp
Ngaba kukho umntu owaziyo ukuba ndiyakwazi ukuvula iifayile ze-dwg ne-dxf kwi-quantum gis?
Ufanele uchaze ngakumbi ingxaki yakho:
Ngaba uyazi ukulayisha umgca we-kml?
Ingabe uyathumela umyalezo?
Yithwala umgca kwipaneli ecaleni kodwa ungaboni izinto?
Andikwazi ukungena kwiifayile ze-kml kwi-5.0 inguqulelo ye-google yomhlaba i-aquantum gis nabani na ongandinceda i-quantum gis ver ngu-1.2
Ewe bayabaxhasa. Ukuziva usekude, i-Qgis isebenza kakuhle kakhulu ngeGrass kunye ne-gvSIG eneSextant.
hol, bendifuna ukwazi ukuba ezi nkqubo zinje ngeQgis, gvgis okanye ingca inkxaso yeefayile zeshishini (i-shp, itab …….) kwaye zingaphathwa ukuze zibonakale kude?
Molo, ndingumfundi weGeomatics career, ndikhangela nje ndafumanisa ngale nguqulo intsha isimahla kwaye ndingayithatha naphi na nge-USB, yeyiphi indlela elungileyo kubafundi endiyithethayo njengomfundi kwaye ndiyazithanda iintlobo ezi-3 zezixhobo kodwa ngaphezulu i-QGIS leyo yinto efana neArgis kwaye ilungile kumcimbi wokumiliselwa komhlaba ndinokwenza kuphela impumlo elula ukuba kukho ukhetho apho ndingenza khona isikhuseli esininzi… jonga ukuba uyandithumela imizekelo yendlela yokukhuphela imifanekiso kuGoogle emhlabeni onamagama ye-avenue..iigasi ..
Kule nto uya ku:
I-add-ons / i-OGR yomguquleli / sebenzisa i-OGR yokuguqulwa komgca
Emva koko ukhetha iifayile zangaphambili (umthombo), ukhetha i-kml format, kunye namalamlilo
Emva koko, ngaphantsi ukhetha indawo (ekujoliswe kuyo) kwaye ukhethe ukuba uguqulwe kwi shp
umbuzo iintsuku ezimbalwa ezedlule ufake i-qgis Ndifuna ukwazi ukuba kunokwenzeka ukuguqula iifayile ze-kml ukuya kwi-shp kwaye njani
Ulungile iTuxcan, isantya senkqubo ye-Qgis sithathwa ngcono kune-gvSIG. Ukuze ube zizixhobo zasimahla, zikhule kakhulu kwaye ngoku ngezi unokusebenza ngokungathi yenkqubo yabucala.
Ndiyathanda kakhulu iiprojekthi ze-GvSIG kunye ne-Quantum ze-GIS, zombini ezithembisa izixhobo ezininzi kunye nezibonelelo kwimisebenzi ye-GIS. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha ukunyanzeliswa kwezicelo ze-JAVA, ezihlukileyo kwiinkqubo ezicacileyo ze-QGIS, kufuneka zigxininiswe. Into ebalulekileyo malunga neQGIS yiPython API yeprogram yohlelo lwe desktop, uxhumano lwayo kwi-GRASS GIS kunye nenkxaso yeendidi ezahlukeneyo zefomathi. I-gvSIG Ndigxininisa ukusebenza kwayo ngokubanzi nge-SEXTANTE GIS kunye neendlela ezinzulu zokuxhamla kumadivayisi eselula, ukuboniswa kwe-3D, ukushicilelwa, kodwa ndigxininisa nge-LENGTH yokusebenza kwayo. Kubuthathaka bobabini izixhobo kukubunjwa kweemephu, kuba ngoku kude kuncinci. Ndicinga ukuba kulungile ukuba ngethuba lithile banokufaka izixhobo zokuhlela ze-KOSMO okanye i-OpenJUMP, endiyifumene epheleleyo kwaye enobungane.
Ezi zombini iiprojekthi zikhulu kwaye zikhuthazwe ngendlela engafanelekanga kwesoftware ye-GIS yamahhala, yikho inkululeko yesofthiwe, ukuvumela ukuba sikhethe izixhobo ezinokuhlangabezana neemfuno zethu.
Ngokuthobeka, kulungile ukufumana ulwazi lweblogi yakho. . . Ndiyakuvuyela ePatagonia yaseArgentina